Trano malefaka ambony tampon-trano, lamba fisaronana tafo fiara, tranolay tranofiara - Arcadia
Manana ekipa teknika matihanina izahay
Fanaraha-maso fifehezana kalitao hentitra mba hahazoana antoka fa 100% no mahay
Manomeza tolotra matihanina, ara-potoana ary manorina.
Ny tranolay ambony tampon-trano Arcadia dia vita amin'ny habe samihafa: 1.2 * 2.4M, 1.4 * 2.4M, 1.6 * 2.4M, 1.8 * 2.4M, miaraka amin'ireo fitaovana maharitra 280G polycotton 280G tsy miovaova, diamondra 600D Oxford, 420D Oxford . Ny habe sy ny fitaovana dia samy tsy voatery. Atsangana haingana izy ireo ary mora apetraka amin'ny bara vita amin'ny tafo. Safidy tsy maintsy atao ao ambanin'ny efitra annex.
Fototra fandriana: Ny lanjan'ny Aluminium maivana 1mm matevina
Pole: Aluminium poles Dia 16mm
Kidoro: savony haavo 6cm misy fonony azo esorina
Loko fitsangatsanganana: 450G PVC misy velcro sy zipper
Ny varavarankely, ny kitapo kiraro dia tsy voatery
Trano an-tampon'ny tampon-trano mafy
Ny tranolay ambony tafo Arcadia Hard shell dia tsara kalitao avo lenta ho an'ny tranofiara na fiara fitobiana .Naharitra ela kokoa ny tranom-baravarana Shell Rooftop.ary mahatohitra izay atorin'ny lalana anao. Tsy vitan'ny tantera-drano tanteraka izy ireo, fa afaka miaina ny lanezy ary mahazaka rivotra tsara kokoa. Ny Hard Shell Roof Top Tents dia toa mora indrindra ihany koa apetaka, apetakao ara-bakiteny amin'ny valin-drihana, ary rehefa vonona ny hiditra ao ianao dia atsangano fotsiny ny iray amin'ireo sisiny ary mora sy tsotra izy io, maka kely noho ny iray minitra.
Size: 203 * 138 * 100CM
Lamba: polycotton 280G
Tohatra Aluminium Telescopic tohatra
Ny fomba roa dia tsy voatery
Ny arcadia swag dia mety amin'ny fitobiana, fitsangatsanganana, fitsangantsanganana na faran'ny herinandro, izay haingana, mora, maharitra, mahazaka toetr'andro, olona 1 na 2 miampy roa, tokana, mpanjaka na avo roa heny. Ireo sary dia misy kidoro busa, mora apetraka ary ento ny antoka ara-kalitaonay. Izy io koa dia misy sisin'ny gorodona tsy tantera-drano izay misakana ny fivoahan'ny ando. Ny endriny nohatsaraina ankehitriny dia mampiasa tsato-kazo vita amin'ny alimina izay mitondra tanjaka sy filaminana fanampiny.
Lamba: polycotton 400G, ripstop, tantera-drano
Poloney: Pao aliminioma 7.9MM
Zipper: marika SBS
Tany: 450G pvc
Kidoro satroka: hatevin'ny 6cm misy fonony azo esorina
OEM dia misy
Fiarovan'ny tafo fiara
Arcadia dia mamokatra karazam-baravarankely tsy azo averina, amin'ny habe isan-karazany, mba hifanaraka amin'ny fiara misy valizy tafo. Miaraka amin'ny faritra azo atao: rindrina sisiny, efitrano harato, gorodona fasika sns.
Size: toy ny mpanjifa takiana
Lamba: polycotton 280G na adidy mavesatra 420D Oxford
Poloney: Alumnium misy clip plastika
Saron'ny vovoka: 600G PVC